မြန်မာပြည်ရဲ့ အတန်ဆုံး Facebook Pack | Telenor Myanmar
မြန်မာပြည်ရဲ့ အတန်ဆုံး Facebook Pack
အတန်ဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
တစ်နေ့သုံး Facebook Pack သည် Facebook သုံးစွဲရန် ၁၈၈ မီဂါဘိုက် ကို ၁,၉၉ကျပ် (tax ပါဝင်ပြီး) သာကျသင့်မည့် Pack ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာအတွင်း သုံးစွဲရန် ဖြစ်ပါသည်။
အပတ်စဉ်သုံး Facebook Pack သည် Facebook သုံးစွဲရန် ၉၅၀ မီဂါဘိုက် ကို ၉၉၉ကျပ် (tax ပါဝင်ပြီး) သာကျသင့်မည့် Pack ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း သုံးစွဲရန် ဖြစ်ပါသည်။
အပတ်စဉ်သုံး Facebook Pack သည် Facebook သုံးစွဲရန် ၂၈၅၀ မီဂါဘိုက် ကို ၂,၉၉၉ကျပ် (tax ပါဝင်ပြီး) သာကျသင့်မည့် Pack ဖြစ်ပြီး တစ်လအတွင်း သုံးစွဲရန် ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့သုံး Facebook Pack
188 MB (Facebook အသုံးပြုရန်)
၅၀၀ သို့ “FB199” ဟု sms ပို့ပါ
*4021# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ
ဝယ်ယူနေသော Daily 199 Facebook Pack
အပတ်စဉ်သုံး Facebook Pack
950 MB (Facebook အသုံးပြုရန်)
၅၀၀ သို့ “FB999”ဟု sms ပို့ပါ
*4022# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ
ဝယ်ယူနေသော Weekly Facebook Pack
လစဉ်သုံး Facebook Pack
2.78 GB (Facebook အသုံးပြုရန်)
၅၀၀ သို့ “FB2999”ဟု sms ပို့ပါ
*4023# သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ
ဝယ်ယူနေသော Monthly Facebook 2999 MB
၁၈၈ မီဂါဘိုက် (Facebook အသုံးပြုရန်)
၉၅၀ မီဂါဘိုက် (Facebook အသုံးပြုရန်)
၂၈၅၀ မီဂါဘိုက်(Facebook အသုံးပြုရန်)
Auto renewal မဟုတ်သဖြင့် ပယ်ဖျက်ရန်မလိုပါ။
တစ်နေ့သုံး Pack သည် Package ဝယ်ယူသည့်နေ့၏ 23:59:59 နာရီတွင် ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
ဤ Pack များဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြု အသံခေါ်ဆိုမှု (VOIP) များကို ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အင်တာနက်အသုံးပြု အသံခေါ်ဆိုမှု (VOIP) များကို Facebook မှ တဆင့်ပြုလုပ်ပါက အသုံးပြုသူ၏ Main Balance မှ အသုံးပြုနေသော Price Plan ၏ Standard rate အတိုင်း ဖြတ်တောက်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
တစ်နေ့သုံး ၁၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ် ကို မည်သို့ ဝယ်ယူလို့ ရပါသလဲ?
customers အနေနဲ့ 500 သို့ SMS ‘FB199’ ’ ပို့ခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) USSD direct dial code *4021# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် လည်းကောင်း ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အပတ်စဉ်သုံး ၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ် ကို မည်သို့ ဝယ်ယူလို့ ရပါသလဲ?
customers အနေနဲ့ 500 သို့ SMS ‘FB999’ ’ ပို့ခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) USSD direct dial code *4022# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် လည်းကောင်း ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ် ကို မည်သို့ ဝယ်ယူလို့ ရပါသလဲ?
customers အနေနဲ့ 500 သို့ SMS ‘FB2999’ ’ ပို့ခြင်းဖြင့် ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) USSD direct dial code *4023# ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဖြင့် လည်းကောင်း ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်ကို ရယူပြီးပါက သုံးစွဲနိုင်သော ကာလက ဘယ်လောက်ပါလဲ။
သုံးစွဲနိုင်သော ကာလမှာ ရက် ၃၀ (ဝယ်ယူသော အချိန်အတိအကျမှ ၇၂၀ နာရီအထိ) အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်
လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်ကို prepaid customers ရော postpaid customers ရော ဝယ်ယူလို့ ရပါသလား?
ဤ လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်ကို Prepaid Customer များသာ ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်ကို တစ်နေ့အတွင်း ဝယ်ယူခွင့် အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထား ပါသလား?
ကန့်သတ်မထားပါ။ customer မှ လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်ကို တစ်နေ့အတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်လအတွင်းသော်လည်းကောင်း၊ အစီအစဉ်ရရှိနေသည့်အချိန်ကာလအတွင်းသော်လည်းကောင်း အကြိမ်ကြိမ် ဝယ်ယူ၍ ရပါသည်။
အကယ်၍ customer မှ တစ်နေ့အတွင်း ၂ကြိမ်ဝယ်ယူ ပါက Facebook သုံးစွဲရန် စုစုပေါင်း ၅၉၉၈ MB (2999 MB x ၂ကြိမ်) ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲခွင့်ကာလမှာ Facebook Monthly အစီအစဉ်ကို နောက်ဆုံးဝယ်ယူသည့်အချိန်မှ သက်တိုင်းအတိုင်းဖြစ်ပါမည်။
အကယ်၍ လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ် ဝယ်ယူသူ မှာ လက်ရှိတွင် internet pack တခုခု အလျှင်ဝယ်ယူထားပြီး ဖြစ်ပါက Facebook usage အသုံးပြုခ ကို မည်သို့ကောက်ခံ ပါသလဲ?
Facebook အသုံးပြုခ ကို လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်မှ ရှေးဦးစွာ အသုံးပြုခ ကောက်ခံပြီးမှ နောက်ထပ်သုံးစွဲသည့် ပမာဏများကို internet pack မှ အသုံးပြုခ ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည််။
အကယ်၍ လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ် ဝယ်ယူသူ မှာ လက်ရှိတွင် Night pack ဝယ်ယူထားပြီး ဖြစ်ပါက ည၁၁နာရီ နှင့် နံနက်ရနာရီ အတွင်း Facebook usage အသုံးပြုခ ကို မည်သို့ကောက်ခံပါသလဲ?
ဤ လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်ဖြင့် VOIP calls ခေါ်ဆိုလို့ရနိုင်ပါသလား?
ဤ လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ်ဖြင့် VOIP calls ခေါ်ဆိုရန် အကျုံးမဝင်ပါ။ Facebook ပေါ်တွင် VOIP calls ခေါ်ဆိုပါက customer ၏ main account balance လက်ကျန်ထဲမှ ထို customer သုံးစွဲလျှက်ရှိသော price plan အတိုင်း မူလပုံမှန် data အသုံးပြုခ ကို ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လစဉ်သုံး ၂၉၉၉ မီဂါဘိုက် Facebook အစီအစဉ််ရဲ့စျေးနှုန်းမှာ အခွန်အတွက်ကျသင့်ငွေပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါသလား